PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-10-22 - Sikwazi
Isolezwe ngeSonto - 2017-10-22 - ABANTU -
kodwa manje usegxile kakhulu esikhondlakhondleni sebhizinisi lokugaya iMega Star.
USandy B udabuka elokishini laseHammarsdale, iMpumalanga, kodwa ukhulele eChesterville, eThekwini.
“Angisazi isibongo sami sangempela, okuyisizathu esenza ngingashadelwa nokuthi izingane zingabizi isibongo sami. Ngike ngacabanga ukuqala umndeni, ngithandana nezinye izinhlanga njengamaChina, amaNdiya nabelungu ngoba ngingafuni unkosikazi ozosebenzisa isibongo sami.”
Uthe unina waba nezingane ezingu-8, yena ungowesithupha.
“Abadala kunami wabatholela emshadweni, wabe esehlukanisa, waqhubeka nempilo. Mina nabangilamayo sihlukane ngobaba. Imina ngedwa ongamazi ubaba. Izimpawu zokungazalwa ndawonye zinokuziveza. Lokho kwenza umphefumulo wami ungakhulululeki, nakuba ngikhule ngiwuthanda umndeni wasekhaya.
“Kuningi engingakwazi ukukuqondisa ngomlando wempilo yami ngenxa yokuthi kunzima ukuthola izimpendulo ngoba umama usemdala kakhulu, futhi eminyakeni eminingi edlule ube nesifo esimphazamisa emqondweni, kusukela ngesikhathi sodlame olwahlukumeza imindeni eminingi. Kwamphoqa ukuthi ashiye umuzi wakhe ahambe eqasha.”
Uthe unina wathandana nendoda eyayishadile, ayengasazi kahle isibongo sayo, eyamlaxaza esakhulelwe izinyanga ezimbili kanti nesibongo sikanina akasazi ngoba kuthiwa uzalwa yindoda yaseMozambique eyafika kuleli yasebenzisa igama layo. “Wazishintsha isibongo wathi ungowakwaMthethwa. Ngazibiza ngoBhengu lapho kushadele khona umama.”
Uthe ukuhlakazeka komndeni wakhe yikho okwamenza wagcina esekhuliswa yizihlobo eChesterville, esezibonela njengechwane lenyoka.
“Ngikhule ngifisa ukuba isibonelo esihle nakwabanye ukuthi ubunzima buyamakha umuntu. Ukube ngangiwomunye umuntu, ngangizoba uhobo nje. Abe maningi amathuba okuthi ngingene ebugebengwini, izidakamizwa, utshwala nokunye nje. Ukuboshwa ngiyakwazi, izidakamizwa ngiyazazi, lezi izinto engingafisi nakancane umuntu asondelane nazo ngoba zibuyiselana emuva, zishabalalise namaphupho.”
USandy B ukhule enesifiso sokuba ummeli, kangangoba ubechitha isikhathi esiningi emtapweni wolwazi efunda izincwadi ezikhuluma ngobummeli, esebenzisa amatemu akhona uma kunezinkulumompikiswano esikoleni.
Ukuhlukumezeka esikoleni ayefunda kuso eChesterville
High, sekuzobhalwa izivivinyo zika-matric, kwaliphunzisa lelo phupho ngoba akaphumelelanga ngendlela eyayizomenza afundele ubummeli.
Wagcina esengena ephuma emakolishi enza izifundo ezimfishane zamabhizinisi ne-computer, ezihlomisa ngezincwadi zasemitapweni yolwazi.
“Bengithanda ukufunda ngezomculo, umlando, ipolitiki nezamabhizinisi. Kuthe uma ngithola umsebenzi oqondile esitolo sezimpahla, owawungiholela imali encane kodwa ngawubambisisa.
“Ngasebenza ngaze ngaba imenenja, ngiphethe abasebenzi abangu-13. Kwakunzima ngoba abaningi babeshaya ngeziqu, mina ngingenazo kodwa ngizishibilikela sengathi nginazo, abaningi kungamaNdiya.
“Abaculi abaningi baseGoli, bebeza khona uma befuna imiswenko uma beseThekwini.” Uthe washiya kule nkampani esesebenze iminyaka engu-9 ngenxa yokuxinwa wumsebenzi wokucula. Uthe baningi abaculi abafukulile kule ndima kodwa yena abekho abamsizayo.
“Ngikhule ngisaba ukucela usizo kubantu, kuze kube namhlanje ngizishaya isifuba ngokuthi akekho noyedwa ongaqhamuka nje athi usewake wangilekelela ukuze ngiphumelele.
“Kuyimanje nginebhizinisi lemishini yokubala imali ngokushesha ejwayele ukubonakala emabhange nasezitolo, okuyibhizinisi elingajwayelekile kubantu abamnyama.
“Ngizitholela mina amaqhinga okuphila, ngisebenza ngokuzikhandla. Noma ngubani uyadinga ukulekelelwa nami ngiyadinga kodwa kuyangehlula ukucela.
“Ngike ngibe nesifiso sokuthi ngabe kukhona ababona izinto esengazenza ukufukula lesi sifundazwe namagalelo esengibe nawo kusukela ngeminyaka ka-1990, bese benza okuthize ngakho.
“Angisayiphathi eyoMasipala weTheku ongakaze unikele ngisho nango-R10 enkampanini yami, esisize bonke abaculi esiziqhenya ngabo ngezidingo abebeziyela eGoli yonke iminyaka.”
Uthe izinkampani zaseGoli bezimnxenxa kudala ukuba alishiye iTheku. “Kodwa nganqaba, ngoba ngifisa ukubona okwakwenzeka eGoli kwenzeke nalapha.
“Ngike ngalekelela izinkampani ezinjenge Ghetto Ruff noKalawa Jazmee ngesikhathi zisakhula ngokuba sampulela nokumaketha izinto zabo eThekwini, ngivolontiya.
“Nezikhungo okumele ngabe zisiza abaculi, ziphethwe abantu abangazi kahle ukuthi ngobani abanomlando omuhle, abadinga ukunakwa ngendlela efanele. Sekuya ngobungani, ubuxoki nepolitiki. Lezi zizathu zenza ngizisole ukuthi angifudukanga ngani ngiye eGoli elalingidinga kangaka futhi betshengisa ukuwubona umfutho wami.
Abanye babaculi abasebenzisa iMega Star singabala uZakes Bantwini, DJ Tira, Joocy, Museeq IQ, uGlama, Professor, Babes Wodumo, Big NUZ, Naima Kay, Sox, DJ Bongz, Malini, Kotin, Merlon, Mondli Ngcobo, Sosha, Bullistic, Mfiliseni Magubane, Shabalala Rhythm, Sipho Makhabane, Igcokama, Msawawa, Ithemba, Distruction Boys, Shota, Culoe De Song nabanye abaningi. USandy B uqale ukucula emaqenjini okholo iLiving Voices, Young Olives, Chesterville Choral neParadox.
Eminyakeni eyedlule uke waqopha ngokuhlanganyela noPaul Hussey osesebenze nabaculi abaningi baphesheya abadume ngesigqi se-reggae ne-dancehall okubalwa uShabba Ranks, UB40, Sean Paul nabanye.
“Siqophe izingoma ezinesigqi se-reggae eculwa ngesiZulu ezikhishwe kwicwecwe phesheya kwezilwandle.
Ngike ngacula ngokuhlanganyela neThird World ezinze eJamaica eholwa uMichael Ibo Cooper, senza iculo iPeace Africa Peace ingoma eyayihlose ukwakha ukuthula ezwenikazi i-Africa.” USandy B ubuye acobelele abaculi ngolwazi